Business Archives - D-lann
ဒေသတွင်းငါး၊ပုစွန်၊ကဏန်းများ အရောင်းအဝယ် ရပ်ပစ်ရမည့်အထိရောင်းအားကျဆင်းနေ
ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းရှိ ရေယာဉ်များ ‘အမ်ဖန်’ စူပါ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း အန္တရာယ်ကို ရှောင်ရှားရန် တိုင်းအစိုးရမှ သတိပေ
Covid-19 ကြောင့်၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ခွင့်ပြုခဲ့သည့် မော်တော်ယာဉ် သွင်းကုန်လိုင်စင်များကို သက်တမ်း နှစ်လ ထပ်တိုးခွင့်ပြုမည်
တိုင်းအတွင်းပြေးဆွဲနေသည့် ခရီးသည်တင် ယာဉ်များအားလုံးကို စတင်ပြေးဆွဲခွင့်ပြု
နွားများမှ ရဲစခန်းဆိုင်းဘုတ်ဝင်တိုက်ပြီးပျက်စီးသည့်အပေါ် မကျေနပ်သဖြင့် ပိုင်ရှင်အား ရဲကင်းမှူးမှရိုက်နှက်သဖြင့်စုံခုံဖွဲ့စစ်ဆေးနေ
စျေးများအားလုံး၊ထမင်းဆိုင်နှင့် လမ်းဘေးဆိုင်များစည်းကမ်းနှင့် ညီမှ ပြန်ဖွင့်ခွင့်ပြုမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကျပ် ၁၃ ဘီလီယံ ထုတ်ချေးပေးထား
Mask ပြိုင်ပွဲတွင်ဆုရသူများကို ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်းလွှာချီးမြှင့်ပြီးvideo conferencing လုပ်မည်
“ လတ်တလောအဆင်မပြေမှုဆိုတာ နောင်တချိန်မှာ ပြန်ပြောတိုင်း ရယ်မောစရာတစ်ခုပါ ”
“ သူတို့ကို တန်ဖိုးထား လေးစားပေးကြပါ ”
ထိုင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းကို ခြိမ်းခြောက်နေသည့် ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်
ဖေဇော်ဂျီ ဖိုးဝိဇ္ဖာ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆေးဖော်ခန်း
အခြေခံဥပဒေကို မပြင်ချင်တာဟာပြည်ထောင်စုပြိုကွဲမှာ စိုးရိမ်လို့ဆိုတာသေချာရဲ့လား (၁)
By edi tor January 24, 2020
ရန်ကုန် ၊ ဇန်နဝါရီ ၂၄
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှထုတ်ဝေနေသည့် မြို့တော်သတင်းစာမှာအမြတ်ရနေသည်ဟုမြို့တော်ဝန်ပြောကြား ထားသော်လည်း စာရင်းစစ်ချုပ် အစီရင်ခံစာတွင်အရှုံးပေါ်နေ ကြောင်း အင်းစိန်မြို့နယ် ၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၂ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝေဖြိုးဟန်ကပြောသည်။
ဒုတိယအကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး စာရင်းစစ်ချုပ်၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာအ ပေါ်ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ၏လေ့လာတွေ့ရှိချက် ၊ သဘော ထားမှတ်ချက်အစီရင်ခံစာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ဆွေးနွေးစဉ်ထည့်သွင်း ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
စာရင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာ ထဲထည့်ပြီးထောက်ပြမှမြို့တော်သတင်းစာရပ်ဆိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ အစောကြီးကတည်းကအ မြင်မှန်ရသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။တော်တော်လေးနောက်ကျမှ အမြင်မှန်ရသွားတာက လုံးဝမရတာထက်စာရင် ကျေးဇူးတောင် တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြို့တော်မဂ္ဂဇင်းကိုလည်း နှစ်လ တကြိမ်ထုတ်သည့်အတွက် နှစ်လတခါရှုံးနေရာထုတ်ခဲ့သောနှစ် များအား ပြန်တွက်ကြည့်ရင်ရှုံးတဲ့ငွေတွေကနှမြောစရာကောင်း တယ်ဟုတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝေဖြိုးဟန်ကပြောသည်။
တချို့ကပြောတယ်။ မြို့တော်သတင်းစာပိတ်လိုက်ပြီပြောတယ်။ သတင်းစာမပိတ်ပါဘူး။ သတင်းစာကိုအသွင်ပြောင်းလိုက်တာပါ။ သတင်းစာ ၊ ဂျာနယ်အများစုကများသောအားဖြင့်ရှုံးတယ်။ အဲအ တွက်ဘာနဲ့ကာဗာလုပ်ရလဲဆိုတော့ ကြောညာနဲ့ကာဗာလုပ်ရတယ် ကျွန်တော်တို့မြို့တော်သတင်းစာကျတော့မြတ်တယ်။ မြတ်ရင်းနဲ့ ဘာလို့ပိတ်လဲဆိုတော့ City Grovement use လိုဖြစ်နေတယ်။ ဘာလို့ရပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ ကြောငြာအားကောင်းရှိတယ်။ဒီကြောငြာထဲမှာထည့်မှ ဒီဟာကိုအတည်ပြုမယ် ဆိုတဲ့ဟာ ဘယ်သတင်းစာထဲထည့်ထည့် မြို့တော်သတင်းစာထဲ ထည့်မှမဟုတ်ဘူး။ သတင်းစာကတချို့နေရာတွေမှာ မဆလ ခေတ်ကလိုဆန်ရောင်းရင်ဆီပါတွဲယူရတာတို့ ၊ သတင်းစာလဲ အဲဒီလိုပုံစံမျိုး ၊တချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် ဈေးတို့ဘာတို့မှာ သတင်းစာ ဟာမယူမနေရ။ဒါမဟုတ်ဘူး။သူယူချင်ယူမှာပေါ့။ ဒါကြောင့်သတင်းစာကမရှုံးနိုင်ဘူး။ မြတ်တယ်။ သို့သော်အဲအမြတ်ကကောင်းလားဆိုတော့ မကောင်းဘူး။အဲတာကြောင့်ဆိုရှယ်မီဒီ ယာအနေနဲ့အွန်လိုင်းပြောင်းလိုက်တာဟုစည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်မြို့တော်ဝန်ဦးမောင် မောင်စိုးကပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက ထုတ်ဝေသည့် မြို့တော်သတင်းစာ၏ထုတ်လုပ်စရိတ်သည်တစ်စောင်လျင် ကျပ် ၁၂၀ ဖြစ်ပြီး ငွေကျပ် ၅၀ ဖြင့်ရောင်းချနေသဖြင့်နှစ်စဉ်ကျပ် ၇၂ သန်းမှ ၈၂ သန်းအထိ အရှုံးပေါ်နေကြောင်း ၊ မြို့တော်မဂ္ဂဇင်း သည်လည်း တစ်အုပ်လျှင်ကုန်ကျစရိတ် ငွေကျပ် ၂၇၅၀ ဖြစ်ပြီး ကျပ် ၂၀၀၀ ဖြင့်ရောင်းချနေသဖြင့် တစ်အုပ်လျှင် ကျပ် ၇၅၀ ရှုံးနေကြောင်းသိရသည်။
By edi tor
AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှာတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်သည့်အတွက် အခွန်ပေးစရာမလိုဟုဆို
By edi tor December 25, 2019
AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှာတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်သည့်အတွက် အခွန်ပေးစရာမလိုဟုဆို ရန်ကုန် ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၅ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့သည် တရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့်အတွက် အခွန်ပေးစရာမလိုကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။ “ နိုင်ငံရေးအရနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ထိခိုက်စရာမရှိဘူးလေ။ သူတို့ကတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းမှ မဟုတ်တာ။…
မြို့နယ် ၂၉ ခုတွင် အခြေခံစျေးနှုန်းဖြင့် စပါးဝယ်ယူရန် လုပ်ငန်းရှင်များကို တင်ဒါအဆိုပြုလွှာများခေါ်ယူ
By edi tor December 16, 2019
မြို့နယ် ၂၉ ခုတွင် အခြေခံစျေးနှုန်းဖြင့် စပါးဝယ်ယူရန် လုပ်ငန်းရှင်များကို တင်ဒါအဆိုပြုလွှာများခေါ်ယူ ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ယခု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အခြေခံစျေးနှုန်းဖြင့် စပါးဝယ်ယူရန် တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်ရေးဦးဆောင်အဖွဲ့၊ လယ်ယာထုတ်ကုန်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့က…
ICJ တွင် တရားစွဲမှုကိုထိရောက်စွာ ပြန်လည်တင်ပြနိုင်ခဲ့သဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုထိခိုက်နိုင်ခြင်းမရှိ
By edi tor December 14, 2019
ICJ တွင် တရားစွဲမှုကိုထိရောက်စွာ ပြန်လည်တင်ပြနိုင်ခဲ့သဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုထိခိုက်နိုင်ခြင်းမရှိ ရန်ကုန် ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက တရားစွဲဆိုမှုကို မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ ထိရောက်စွာ ပြန်လည်တင်ပြနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် စီးပွားရေးထိခိုက်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း စီးပွားရေးပညာရှင်ပါမောက္ခဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက် ကပြောသည်။ “ ICJ…
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် မဲဆောက်နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုး ဘတ်ဘီလီယံ ၁၀၀ အထိရရှိမည်
By edi tor November 9, 2019
မြဝတီ ၊ နိုဝင်ဘာ ၉ ထိုင်း-မြန်မာချစ်ကြည်ရေးတံတားအမှတ် (၂) မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် မဲဆောက်မှတဆင့် နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုး ဘတ်ဘီလီယံ ၁၀၀ အထိရရှိလာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။ ဒီတံတားက နိုဝင်ဘာတစ်ရက်နေ့ကတည်းက…
ထိုင်းထောက်ပံ့ငွေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပုစွန်မွေးမြူရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ေရးဆိုင်ရာစီမံကိန်း ဆောင်ရွက်မည်
By edi tor November 1, 2019
ရန်ကုန်၊ နို၀ငိဘာ ၁ ထိုင်းနိုင်ငံမှထောက်ပံ့ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်သန်းခန့်ဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ၊ စစ်တွေမြို့ ရေချမ်းပြင် ပုစွန်သားပေါက်စခန်းတွင် ပုစွန်မွေးမြူရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာစီမံကိန်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးမြင့်ဇင်ထူးက ပြောသည်။ အမှန်တစ်ကယ် ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်ကတည်းကစရမှာ။ ထိုင်းထောက်ပံ့ငွေက နောက်ကျနေတဲ့အတွက် မစနိုင်တာ။…
တိုင်းအစိုးရ ရောင်းချမြေကွက်များ ပေါက်ဈေး အပြင် Infrastructure လိုအပ်ချက် စရိတ်ပါ ဝယ်သူက ထပ်မံ ပေးသွင်းရမည်
By edi tor October 29, 2019
တိုင်းအစိုးရ ရောင်းချမြေကွက်များ ပေါက်ဈေး အပြင် Infrastructure လိုအပ်ချက် စရိတ်ပါ ဝယ်သူက ထပ်မံ ပေးသွင်းရမည် ရန်ကုန် ၊ အောက်တိုဘာ ၃၀ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ရောင်း ချနေ‌သော…
ပင်စင်ယူမည့် အစိုးရဝန်ထမ်း သုံးသောင်းအတွက် အိမ်ရာစီမံကိန်း မလေးရှားကုမ်္ပဏီနှင့် ပူးပေါင်းမည်
By MMcities September 28, 2019
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ပင်စင် ယူမည့်အစိုးရဝန်ထမ်း ၃၀ဝ၀ဝ အတွက် တည်ဆောက်နေသည့် အိမ်ရာစီမံကိန်းတစ်ခုကို မလေး ရှားကုမ်္ပဏီနှင့် ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီး ချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြော သည်။ ““တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့ဘက်ကို…
By MMcities July 15, 2016
“ချေးငွေပြဿနာ၊ အတိုးနှုန်း ပြဿနာ၊ ဒုတိယတစ်ချက်က အရင်က ၀န်ထမ်းတွေ အများကြီးခန့်တဲ့ ကုမ်္မဏီတွေကျတော့လည်း အခုလို စီးပွားရေး တုံ့နှေးတဲ့အချိန်မှာ ပိုပြီးတော့ . . .´´ လက်ရှိ တိုင်းပြည်စီးပွားရေးအခြေ အနေနှင့် ဆန်စပါးအခြေခံစျေးနှုန်း…
ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်း မြေနေရာချထားခြင်း မူလအမည်ပေါက်ပိုင်ရှင်များ ဦးစားပေးမည်
By MMcities July 14, 2016
ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းအတွက် မြေ နေရာများ ပြန်လည်ချထားရန် မြေကွက် များ စတင် ရွေးချယ်နေပြီဖြစ်ကာ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မှု၌ မူလအမည် ပေါက် ပိုင်ရှင်များကို ဦးစားပေးကာ ပြန် လည်ရောင်းချပေးသွားမည်ဟု ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်း…
Jane Doe on နိုင်ငံရေး မုန်တိုင်းကြားမှ ပါရမီဖြည့်ဖက်
Shane Doe on နိုင်ငံရေး မုန်တိုင်းကြားမှ ပါရမီဖြည့်ဖက်
Same Doe on နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် လူငယ်များ၏ အခန်းကဏ္ဍ
Same Doe on သာသနာရေးဝန်ကြီးဟောင်းဦးဆန်းဆင့် ပါတီထောင်မည့်ကိစ္စ သူရဦးရွှေမန်းပါတီသို့ ဝင်ရောက်ရန် ငြင်းပယ်ခဲ့
Same Doe on ပင်စင်ယူမည့် အစိုးရဝန်ထမ်း သုံးသောင်းအတွက် အိမ်ရာစီမံကိန်း မလေးရှားကုမ်္ပဏီနှင့် ပူးပေါင်းမည်
နိုင်ငံရေး မုန်တိုင်းကြားမှ ပါရမီဖြည့်ဖက်
By MMcities August 14, 2016
Local News (69)
ပန်းခင်းမှာ ပေါင်းမြက်လွှမ်းသရွေ့ . . . ခေတ်မပြင် စနစ်မပြောင်းသရွေ့ တိုက်ပွဲဝင် သတင်းစာအကျင့်ကိုသာ . . . ရဲရဲနီစွေး ဒီလမ်း ရွေးမည်။
Copyright © d-lann. All rights reserved.
Design by MM Cities.